Zvinongedzo kune iOS 8.0 Direct Download | IPhone nhau
iOS 8 yave kuwanikwa Zvekuodha pasi uye nekuwedzera kugona kugona kugadzirisa kuburikidza iTunes kana kuburikidza neOTA otomatiki, pane mukana wekurodha pasi firmware vhezheni yeyedu mudziyo uye nekuita yekudzokorora zvakadzikama kana tiine mukana.
Kana iwe ukasarudza iyi nzira ye dhawunirodha iOS 8 nemawoko kuburikidza neayo yakananga kurodha linkTinofanira kuenda kuTunes uye tinyai kiyi pane yedu keyboard kuti zvichienderana nekuti tinoshandisa Windows kana Mac, ichave imwe kana imwe. Panyaya yeWindows, isu tinofanirwa kubata iyo Shift kiyi (Shift) tisati tadzvanya iyo Regedzera bhatani uye kana tikashandisa Mac, iyo kiyi yekutsikirira ichave iyo Alt kiyi
Kana zvese zvikafamba mushe, hwindo idzva rinozovhura iro rinotisiya sarudza nzira mune iro rekupedzisira vhezheni yeIOS 8 yatakatora pasi. Isu tinongofanirwa kuisarudza uye kurega maitiro acho apedze.
Iye zvino tave nazvo chete kurodha pasi iOS 8 kuburikidza neiyo yakananga kurodha pasi yekubatanidza, iyo, heino runyorwa rweese zvishandiso zvinoenderana neApple nyowani nhare yekushandisa sisitimu:
iPad Mhepo (yechishanu chizvarwa WiFi + Cellular)
iPad Mhepo (yechishanu chizvarwa WiFi)
iPad (yechina chizvarwa CDMA)
iPad (yechina chizvarwa GSM)
iPad (yechina chizvarwa WiFi)
iPad 3 Wi-Fi (chizvarwa chechitatu)
iPad 3 Wi-Fi + Cellular (modhi yeATT)
iPad 3 Wi-Fi + Cellular (modhi yeVerizon)
iPod touch (5th chizvarwa)
Batanidzo - Dzidziso yekuisa iOS 8
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Zvinongedzo kune iOS 8.0 Dhawunirodha Direct
Ariel saun akadaro
Ndatenda Actualidadiphone neruzivo rwese, zvakadaro ini ndinogona kugadzirisa kuburikidza neItunes pasina matambudziko, ikozvino kuyedza IOS8.
Pindura kuna Ariel Saun
leonardo mendez akadaro
Mhoroi, ndakagadzirisa mazuva matatu apfuura kuti ndive vhezheni 3 uye nharembozha yangu yafa, haina kuverenga chigunwe changu, mafoni haandikwane, chiratidzo chinodonha uye zvakanyanya internet inodonha sekondi yega yega, handikwanise kuidzosera kune vhezheni yapfuura
Pindura kuna Leonardo mendez
Ini ndakaisa ios 8 3 mazuva apfuura, saka ndiyo gm yandaisa, chii chandinoita, ndinogara seizvi here kana ini ndinoisa ios 8 yeruzhinji?
Chero ani anoziva kana pangu inoenderana neios 8?
David watokura kare !!! nzwisisa kuti Iphone 4 haishandisi IOS 8 !!!!!
Tarisa, ndinozvibvunza mubvunzo mumwe chete. Ini handina uye ndikaisa ios 8 asi kana iwe wakachiisa, usaise backup yemudziyo wako woedza uye nekutaura. Ndingafarire kana iwe uchigovana kana ikakushandira iwe.
Ndeipi yandinoshandisa mu1457? Ndine goridhe saka handiwani uye handizive kuti ndoriisa ripi
Ndinoziva sei kana yangu iri iPhone 5 (CDMA) iPhone 5 (GSM)?
CDMA ndinonzwisisa kuti haishandise chip kana chinonzi ipapo uye GSM ndiyo inoshandisa chip.
Zviri nyore kana michina yako ikashandisa sim kadhi (gsm) kana kwete (cdma)
David! Kuti iwe haugone kuisa iOS 8 pane yako iPhone 4! Usaomerera
Zvakanaka, handikwanise kugadzirisa, zvinondiudza kuti hazvigone kutanga kubatana ...
Vasiye, zvichave kuti hazvina kukwana zvakaziviswa nezve kuenderana kweiyo ios 8 nemidziyo yainotsigira, kana iwe uchida kuve nechidhinha saka zvakanaka! Handizive kuti nei uchiomesa hupenyu hwako zvakanyanya kana uchingofanira kugadzirisa software uye kutyaira. Kana mumwe munhu akaita kuti maitiro ese aya ave nyore, iri APPLE
Pindura kune sitanglo
Ndine iyo GM vhezheni, ndinofanira kumutsidzira here kana kuti ndiri ok neshanduro iyi?
Nacho Casas akadaro
Sezvo ini ndichiona iyo yekuunganidzwa nhamba yeGM uye yekupedzisira yakafanana ... saka hazvizove zvakafanira kugadzirisa ... iwe unofungei?
Pindura kuna Nacho Casas
Iwe unoziva kana iyo JB inoenderana neIOS 8?
Pindura kuna AragnC7
Enda pasi neiyo Batanidza asi panguva yekumutsiridza zvinotora ingangoita awa rimwe kuti ubvise iyo faira uye inongoenda ku1% yebhawa ... uye zvinotora maminetsi makumi maviri chete kudhawunirodha faira ... rinotora nguva yakareba kudaro tora kutora ????
Ramba uchifunga kuti izvozvi zvese zvakavharwa, mira zvishoma.
Pindura kuna jotaele47
Izvi ndezve kuziva kuti ndeipi modhi ye iphone yaunayo, kana GSM, CDMA ...
Pindura kune appman
Kudhonza kumusoro kwekuzivisa kunoshanda kwauri kuti ubvise? Nekuti ka7 / 10 nguva ini ndinoedza uye chiziviso chinoramba chakabatwa kusvikira ndadzvanya.
Kana uchikahadzika nezveiyo modhi yefoni, kune zvakare iyo yekuvandudza kuburikidza neOTA inobvisa mukana wekukanganisa Mune yangu chaiyo kesi, ini ndakodhaunirodha inoenderana faira (5S GSM) uye kana ndichiedza kugadzirisa kuburikidza iTunes uchishandisa iyi faira, zvakandipa firmware kuenderana matambudziko. Iye zvino ndiri kuedza OTA iyo yandinotarisira kuti haina kundipa matambudziko ...
David Ndinoona kuti pakupedzisira wakakwanisa kuisa iOS 8 pane yako iphone 4, saka mubvunzo wako kune kana paine anoziva kuti pangu inogona kumhanyiswa, handiti?
Pascual Villa akadaro
Zvinotaridza kwandiri kuti une kukanganisa mukutora kweiyo firmware yeiyo 5s. Ndidzo dzimwe nzira dzakatenderedza, idzo dzeGMM muCDMA uye zvinopesana. Ini ndatora pasi iyo GSM ye5s A1457 uye inondipa firmware kukanganisa. Kudhanilodha imwe kwakashanda.
Pindura Pascual Vila
Mune iphone 5 pane zvakare kukanganisa mune kurodha pasi ese ari maviri akafanana 12a
Ini ndinongoda kuiisa kune yangu ipad 2 asi ini handigone kuoneka kuisa ios 9.5
Pindura kune amalia
Mhoroi, ndinoda kuti mundibatsire neiyi link yekutanga iphone, ndatenda
Apple inoburitsa bhuku remushandisi reIOS 8
Dhawunirodha zvinongedzo iOS 8 yekupedzisira vhezheni